निर्दयी घरबेटीले पानीको निहुमा कुटेर मारे ! गरिब परिवारको बिचल्ली (धटनाको पुरा विवरण) - हाम्रो देश
निर्दयी घरबेटीले पानीको निहुमा कुटेर मारे ! गरिब परिवारको बिचल्ली (धटनाको पुरा विवरण)
काठमाडौं । भारत बिहारका ४२ वर्षीय शम्भु महतोले नेपाललाई कर्मभूमि बनाएको दुई दशक नाघ्यो। मोतिहारीको पूर्वी चम्पारण पोस्ट संग्रामपुरस्थित घर छाडेर नेपाल पसेपछि उनी केही वर्ष बारामा बसे। स्थानीयसँग राम्रैसँग घुलमिल भए। त्यहाँ मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँथे।
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, चैत्र २९ गते आइतबार,…
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, चैत्र २७ गते शुक्रबार,…
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, चैत्र २५ गते बुधबार,…
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, चैत्र २४ गते मंगलबार,…